Ixesha kunye nabahlobo 43
Ewe; anga. Inyani yokuphindukuzalwa ngokutsha inikezelwe kumbuzo. Ukuvela ngokutsha — njengemfundiso, loo mntu, ethathwa njengengqondo, uyeza emzimbeni wenyama ukuze afunde izinto ezithile aze enze umsebenzi othile kwihlabathi kobu bomi, aze ke awushiye umzimba wakhe emva koko ofileyo, emva koko ixesha athabatha omnye umzimba wenyama, aze emva koko omnye aze awugqibe umsebenzi wakhe, ulwazi lufumaneka kuye aze aphumelele kwisikolo sobomi-ukuphindukuzalwa yamkelwe ngokungathandabuzekiyo ngabo baye bayiqonda imfundiso kwaye bayisebenzisa ekucaciseni Ukungalingani kuyo yonke into yabantwana abanabazali abafanayo, kwaye ngamadoda nabafazi bayabazi ababambe izikhundla ezohlukeneyo ebomini kwaye zahlukile ekukhuleni komlingiswa, kungakhathalelwa ukuba lilifa, imeko kunye namathuba.
Nangona sele isaziwa, kodwa kangangeenkulungwane imfundiso yokuvela ngokutsha ibingaphandle kwempucuko neemfundiso zaseNtshona. Njengoko ingqondo iya isiqhela ngakumbi kumxholo lowo awuyi kuqonda kuphela ukuphindukuzalwa njengesindululo, kodwa iya kuyiqonda njengenyaniso, okuthi ukuqonda kuya kuvula iimbono ezintsha kunye neengxaki zobomi. Umbuzo ubuzwa kwimbono eyahlukileyo kunaleyo ihlala ibekwa. Iqhele ukuqondwa into yokuba xa ingqondo inomnye umzimba ophezu kwayo ulungiselelwe yona, kwaye ibenamzimba, ithatha nje loo mzimba kwaye iqhubeke nomsebenzi wayo kunye namava apho ingqondo ishiye khona kubomi bokugqibela, njengoko umakhi esenza ezinye izitena ku ezo wayezibeke emsebenzini zangaphambili, okanye njenge-accountant uthatha amatyala akhe kunye namatyala akhe kwiseti yeencwadi azibophelele kuzo. Oku kusebenza kwisininzi, mhlawumbi, sabo bahlala. Bangena ebomini kunye nemithwalo yabo kwaye batyhutyha kuyo ngokukhohlakeleyo, njengamaesile ngemithwalo yabo, okanye baxhathisa bekhatywa yimisebenzi nayo yonke into ngokubanzi, bayala ukwamkela nokuthwala uxanduva, njengoondlebende ababhinqayo kwaye baphosa imithwalo yabo. kwaye nantoni na eza ngendlela yabo.
Iingqondo ezifundiswe eNtshona zilulungelelwano olwahlukileyo kolweMpuma, njengoko kubonisiwe bubunzulu bempucuko, ukwenziwa, ukuphuculwa, iindlela ezihlala zitshintsha kunye nemisebenzi yosuku, eNtshona. Ubunzima noxinzelelo zinokuba zinkulu ngoku kunangaphambili; kodwa ngenxa yobunzulu bezinto ezininzi zinokwenziwa ngoku kunokuba zinokwenziwa kwixesha elidlulileyo.
Amaxesha kunye neemeko ezinokubeka umda emsebenzini womntu, kodwa indoda inokusebenzisa amaxesha kunye neemeko zomsebenzi wakhe. Indoda inokudlula ebomini ngokuzenzekelayo, okanye inokuphakama ekubonakaleni kwaye ibe ngumdlali obalaseleyo kwimbali yehlabathi kwaye inike umsebenzi omde kubabhali beendaba zakhe. Imbali yomntu inokubhalwa kwilitye lakhe lesikhumbuzo njenge: “Nali ke umzimba kaHenry Jinks. Uzalelwe kwilokishi yase1854. Wakhula, watshata, wayenabantwana ababini, wathenga kwaye wathengisa, kwaye wasweleka, ”okanye imbali isenokuba ngolunye uhlobo, efana nekaIsaac Newton okanye u-Abraham Lincoln. Umntu ozichukumisayo, kwaye ongalindiyo kwezo meko zibizwa ukuba zimshukumise, akasayi kubekwa mida. Ukuba indoda iyathanda ukwenza njalo, inokudlula kwinqanaba elinye lobomi liye kwelinye, kwaye isebenze kwelo nqanaba ukuya kwelinye, njengoko uLincoln wenzayo; kwaye ukuba uyaqhubeka esebenza, ezimisele ukwenza into yehlabathi kwaye ekhokelwa sisizathu esihle, uya kuba nomsebenzi omkhulu awuphathisiweyo, ngokwenza oko awazukuwenza umsebenzi wobomi obuninzi kodwa kodwa uya kwenza umsebenzi elimiweyo; kwaye kwimeko apho ke umhlaba uya kuthi kwixesha elizayo uqhubeke abe luncedo endaweni yokuthintela yena nomsebenzi wakhe. Oku kusebenza kuwo wonke umntu oluntu owenze umsebenzi wadlula kwisikhululo sobomi ukuya kwesinye.
Kodwa kukho amadoda athi, ngaphandle kwendawo azalelwe kuyo okanye isikhululo ebomini, aphila ubomi bangaphakathi. Obu bomi bangaphakathi kwendoda akuqhelekanga buhamba irekhodi loluntu, kwaye alifane laziwa ngabantu abasondeleyo. Njengokuba indoda inokuhamba kwizitishi ezininzi kubomi basesidlangalaleni, ukufikelela kuye nawuphi na umntu onokuba ngumsebenzi wobomi wenye indoda, ngoko umntu ophila ubomi bangaphakathi angafunda nje ezo zifundo kwaye enze loo msebenzi Injongo yakhe yayikukuba ufanele kobu bomi, kodwa unokufunda kwaye enze umsebenzi owawuza kuthatha ezinye ukuphinda azaliseke, ukuba uyala okanye usilele ukwenza umsebenzi wakhe wokuqala.
Kuxhomekeka endodeni, kwaye yintoni ezimisele ukuyenza. Ngokwesiqhelo imeko yendoda okanye indawo esihlala kuyo siyatshintsha ngokugqitywa komsebenzi omnye kunye nokulungela ukuqala omnye, nangona oku akusoloko kunjalo. Utshintsho ngalunye lomsebenzi okanye umlinganiso unokubonakalisa ubomi obahlukileyo, nangona unokungahlali ulingana nomsebenzi wenguqu yonke. Omnye unokuzalwa kwintsapho yamasela kwaye unyanzelekile ukuba asebenze kunye nabo. Emva kwexesha angabona ukungalunganga kobusela kwaye abushiyele urhwebo lokunyaniseka. Unokushiya urhwebo ukuze alwe emfazweni. Unokugqiba ishishini, kodwa afune ukufikelela ngaphandle kokunxibelelana neshishini lakhe; kwaye unokuqonda okuninzi anqwenelekayo. Utshintsho kubomi bakhe lusenokubonakala ngathi lubangelwe zizinto awayeephoswe kuzo, kwaye ezo zinto zazenzekile ngephutha. Kodwa babengekho. Utshintsho ngalunye kubomi obunjalo lwenzekile ngesimo sakhe sengqondo. Imo yakhe yengqondo idale okanye yavula indlela yomnqweno, kwaye ke oko kwaziswa nethuba lokutshintsha. Imo yokuziphatha kwengqondo izisa okanye ivumele utshintsho lomntu kwiimeko zobomi. Ngesimo sengqondo yakhe indoda inokuthi ebomini enye yenze umsebenzi wobomi obuninzi.